2 Mpanjaka 12 - Ny Baiboly
2 Mpanjaka toko 12
Ny nanjakan'i Joasa - Ny namboarana ny tempoly - Navotam-bola teo an-tanan'i Hazaela Jerosalema - Ny namonoana an'i Joasa.
1Vao fito taona Joasa dia tonga mpanjaka. 2Tamin'ny taona fahafiton'ny nanjakan'i Jeho no vao tonga mpanjaka Joasa ary efapolo taona no nanjakany tao Jerosalema. Ny anaran-dreniny dia Sebia, avy any Bersabea. 3Nanao izay mahitsy eo imason'ny Tompo Joasa tamin'ny andro rehetra nanoloran'i Joiada mpisorona fampianarana azy. 4Nefa kosa ny fitoerana avo, mbola tsy foana, ary notohizan'ny vahoaka ny fanaterana sorona aman-java-manitra teny amin'ny fitoerana avo.
5Ary hoy Joasa tamin'ny mpisorona: Ny volan'ny fitoerana masina rehetra izay aterin'ny olona ao an-tranon'ny Tompo dia ny vola fandoan'ny isan'olona, ny vola avotry ny olona araka ny fanombanana azy avy, ary ny vola rehetra aterin'ny olona samy araka ny fahazotoany avy, ao an-tranon'ny Tompo, 6dia aoka horaisin'ny mpisorona samy avy amin'ny olom-pantany avy, ary aoka hamboatra ny banga amin'ny trano izy ireo amin'izay rehetra hita fa misy banga. 7Kanjo, indro fa tamin'ny fahatelo amby roapolo taona nanjakan'i Joasa, dia mbola tsy voavaotran'ny mpisorona ihany ny banga amin'ny trano, 8ka dia niantso an'i Joiada mpisorona sy ny mpisorona hafa Joasa mpanjaka nilaza tamin'izy ireo hoe: Nahoana no tsy amboarinareo ny banga amin'ny trano? Koa ankehitriny, aza raisinareo intsony ny vola amin'ny olom-pantatrareo, fa atolory hanamboarana ny banga amin'ny trano. 9Dia nanaiky ny tsy handray vola amin'ny vahoaka intsony ny mpisorona, ka tsy azy intsony ny hanamboatra ny banga amin'ny trano.
10Koa naka vata anankiray Joiada mpisorona nasiany loaka ny sarony, napetrany teo anilan'ny otely an-kavanan'ny fidirana ho ao an-tranon'ny Tompo, dia nataon'ny mpisorona mpiandry varavarana tao ny vola rehetra naterin'ny olona tao an-tranon'ny Tompo. 11Nony hitan'izy ireo fa efa misy betsaka ny vola ao am-bata, dia niakatra ny mpanoratry ny mpanjaka sy ny mpisorona lehibe hamehy sy hanisa ny vola rehetra izay ao an-tranon'ny Tompo. 12Dia napetrak'izy ireo eo an-tanan'izay mpanao ny asa, izay voatendry hikarakara ny tranon'ny Tompo, ny vola voalanja, ka ireo no nanome azy ho an'ny mpandrafitra sy ny mpanao taozavatra, izay niasa tamin'ny tranon'ny Tompo, 13ny mpandrafitra vato, ny tambato; nanome izany koa izy ireo hividianana hazo amam-bato voapaika, hanamboarana ny banga amin'ny tranon'ny Tompo, mbamin'ny lany rehetra hanamafisana ny trano. 14Nefa tsy mba nanaovana fitoeran-drano volafotsy, na antsy, na kapoaka, na trompetra, na fanaka volamena na fanaka volafotsy, hatao ao an-tranon'ny Tompo ny vola naterin'ny olona tao an-tranon'ny Tompo, 15fa nomena an'ireo nampanao ny raharaha ihany, hoentiny manamboatra ny tranon'ny Tompo. 16Tsy nampamoahina ny olona nametrahana ny vola homena izay nampanao ny asa, satria nanaraka ny rariny izy. 17Ny vola tamin'ny sorona noho ny ota sy ny sorona noho ny heloka dia tsy mba naterina tao an-tranon'ny Tompo fa an'ny mpisorona.
18Tamin'izany, niakatra namely an'i Geta, Hazaela, mpanjakan'i Siria, ka nahafaka azy. Dia nikasa hiakatra hamely an'i Jerosalema izy. 19Fa nalain'i Joasa mpanjakan'i Jodà kosa ny zava-boahasina rehetra izay nohamasinin'ny razany, Josafata, Jorama, Okoziasa mpanjakan'i Jodà, sy izay nohamasin'ny tenany, mbamin'ny volamena rehetra izay tao amin'ny rakitry ny tranon'ny Tompo sy ny tranon'ny mpanjaka; ka nampanateriny ho an'i Hazaela mpanjakan'i Siria avokoa izany, dia lasa lavitra an'i Jerosalema izy io.
20Ny sisa tamin'ny asan'i Joasa mbamin'izay rehetra nataony, moa tsy dia efa voasoratra ao amin'ny bokin'ny Tantaran'ny mpanjakan'i Jodà va izany? 21Nikomy taminy ny mpanompony ary nanao teti-dratsy, dia nasiany tao an-tranon'i Melao amin'ny fidinan'i Sela Joasa. 22Josakara zanak'i Semaata sy Josabada zanak'i Somera, mpanompony, no namely azy, ka dia maty izy. Nalevina tao amin'ny razany tao an-tanànan'i Davida izy; ary Amasiasa zanany no nanjaka nandimby azy. >
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.2216 seconds